Ingxamisekile ayihlelwanga: iSebe leLizwe lase-US kwi-Ukraine Russia Threat & UAE Attack
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zikaRhulumente » Ingxamisekile ayihlelwanga: iSebe leLizwe lase-US kwi-Ukraine Russia Threat & UAE Attack
114 imiz efundwayo
Ngenxa yobunzima bokuhlaselwa kweRussia eUkraine, eTurboNews ibonelela ngoshicilelo olungekagqitywa lwenkomfa yoonondaba esandula kuqukunjelwa kwiSebe leLizwe lase-US
I-US State State Press Briefing, ngoMvulo wama-24 kaJanuwari 2022,
Uguqulelo olungaHlwanga lweRaw
Ixabiso leNed, iSithethi seSebe
Mnu PRICE: Mholo emvakwemini. NgoMvulo omnandi. Kuhle ukubona wonke umntu. Into nje enye phezulu kwaye ke siyakuthatha imibuzo yakho.
I-United States iyalugxeka uhlaselo lwasebusuku lweHouthis kwi-United Arab Emirates naseSaudi Arabia, olukhokelele kukwenzakala kwabantu eSaudi Arabia kwaye ilandela uhlaselo olufanayo lweHouthi kwiveki ephelileyo olubulale abantu abathathu e-Abu Dhabi. Siyakuqinisekisa kwakhona ukuzibophelela kwethu ekuncedeni ukomeleza ukhuselo lwamahlakani ethu aseSaudi ne-Emirati.
Olu hlaselo lwe-UAE kunye ne-Saudi Arabia, kunye nokuhlaselwa kweenqwelomoya zakutsha nje eYemen ezibulale abantu, zibonisa ukunyuka okukhathazayo okwenza kube nzima ngakumbi ukubandezeleka kwabantu baseYemeni.
Sihlaba ikhwelo kuwo onke amaqela kungquzulwano ukuba azibophelele ekupheliseni imfazwe, athobele izibophelelo zawo phantsi komthetho wamazwe ngamazwe wobuntu, kubandakanywa nezo zinxulumene nokukhuselwa kwabo bonke abemi, kwaye athathe inxaxheba ngokupheleleyo kwinkqubo yoxolo ekhokelwa yi-UN.
Abantu baseYemeni badinga isisombululo ngokukhawuleza kwingxabano, isisombululo sozakuzo esiphucula ubomi babo kwaye sibavumele ukuba bagqibe ngokudibeneyo ngekamva labo.
Ngaloo nto, ndiyavuya ukujika kwimibuzo yakho. Ewe? Kulungile, ndizakuqala emva phaya, njengoko ndandithembisile. Ndiyacela.
UMBUZO: (Ayivakaliyo) kulo mba, ke-
Mnu PRICE: Kulungile. Kakhulu.
UMBUZO: Nceda unyamezele, nceda. Uhlaselo lwanamhlanje lweHouthis kwi-UAE lolweshumi elinesithathu kwiintsuku ezili-10 ezidlulileyo. Ngoko olu hlaselo luye lwakhawuleziswa mva nje. Ngaba siza kubona ngoku ukukhawulezisa okufanayo kwinkqubo yokuqwalaselwa kweBiden-ngolawulo lokubhalisa iiHouthis kuhlaselo lwabanqolobi?
Mnu PRICE: Ku-uxolo, ndi-
UMBUZO: Ukubabuyisela kuhlaselo lwabanqolobi?
Mnu PRICE: Owu, ukubadwelisa.
UMBUZO: Ke oku kukhawuleziswa kuya kuba nesiphumo sokukhawulezisa okufanayo kwinkqubo yoqwalaselo eye yahoywa ngabaphathi beBiden malunga nokubabuyisela kuhlaselo lwabanqolobi?
Mnu PRICE: Ke umbuzo wakho umalunga nobume beHouthis kunye nokwenziwa ngokutsha okunokwenzeka. Ewe, njengoko usazi, uMongameli uthethe nale veki iphelileyo xa ebethetha nesizwe kwinkomfa yakhe noonondaba ngoLwesithathu odlulileyo. Uthe umbuzo wohlengahlengiso, uhlengahlengiso olunokwenzeka lwe-Ansarallah, igama lentshukumo yeHouthi, iphantsi kokuqwalaselwa. Kwaye ke andikho kwimeko yokuxoxa ngawo nawaphi na amanyathelo anokuthi aqwalaselwe.
Nantsi into endizakuyithetha, nangona kunjalo. Siza kuqhubeka nokusebenza namaqabane ethu kulo mmandla, kubandakanya iSaudi Arabia kunye ne-UAE, ukubanceda bakhusele kolu hlaselo lubi lweHouthi. Njengoko idatha yokugqibela endiyibonayo ibonisiwe, ngoncedo lwe-United States, uBukumkani baseSaudi Arabia bukwazi ukukhusela malunga neepesenti ze-90 zolu hlaselo olungenayo oluvela eYemen, ukusuka kwiHouthis. Ewe, injongo yethu, injongo yethu ehlangeneyo, siya kufumana-ukufumana loo nto ibe yipesenti ye-100. Kodwa sisenjalo – siza kuqhubeka ukuma ngamaqabane ethu kule nto.
Sikwanjalo, kwaye sinako, ukuqhubeka nokubamba ukuphendula iinkokeli zeHouthi ngale ndlela yokuziphatha ibekekileyo. Sikhuphe izohlwayo kwiinkokeli eziphambili kunye nokutyunjwa kweenkokeli eziphambili kwezi nyanga zidlulileyo. Kwaye siya kuqhubeka nokubiza zonke izixhobo ezifanelekileyo kwisixhobo sethu sokubamba ezi Houthis, ezo nkokeli zamaHouthi zinoxanduva lolu hlaselo. Asiyi kurhoxa ekutyumbeni iinkokeli zamaHouthi kunye namaqumrhu abandakanyeka kulwaphulo-mthetho olusongela uluntu kunye nozinzo lwengingqi, ukuqhubela phambili ungquzulwano, ukwenza ukuxhatshazwa kwamalungelo oluntu, okanye ukwaphula umthetho wobuntu bamazwe ngamazwe, okanye ukukhulisa eyona ngxaki imbi kakhulu yoluntu ngo-ngokweakhawunti ezininzi. , yeyona ngxaki inzulu yobuntu ebusweni boMhlaba.
Kodwa olu luqwalaselo oluntsonkothileyo, kwaye sathetha ngolu qwalaselo kwiintsuku zokuqala zolawulo, malunga nonyaka odlulileyo ngoku, xa sasithetha ngesigqibo sokuqala malunga neHouthis kuba ekwenzeni oko kuzimisela nokuza. eso sigqibo sokuqala, siphulaphule inani labachaphazelekayo. Seva izilumkiso ezivela kwiZizwe Ezimanyeneyo. Simamele iinkxalabo ezivela kumaqela oluntu. Simamele amalungu amabini eCongress awayechasa isigqibo solawulo lokugqibela sokumisela iHouthis njengombutho wabanqolobi bangaphandle, emva koko i-STDT kuba ngokuyintloko, oko kuzimisela kwengubo kunokuba nefuthe kubuchule bethu bokuhambisa kunye nokubonelela okufunekayo kakhulu. uncedo loluntu kubemi baseYemen.
Isenokuchaphazela ukufikelela kwizinto ezisisiseko ezifana nokutya kunye nepetroli. Kwaye ke sizivile ezo nkxalabo ngokuvakalayo nangokucacileyo, kwaye siyazi ukuba malunga neepesenti ezingama-90 zezinto eziyimfuneko eYemen zingeniswa ngamashishini abucala. Kwaye ngenxa yobuninzi bokulumkisa, ababoneleli bezi - aba baboneleli kunye namaziko emali banokuwuyeka loo msebenzi, obalulekileyo kwiimfuno zobuntu zabantu baseYemeni.
Ngoko saziva ezo nkxalabo ngokuvakalayo nangokucacileyo. Sijonga ngokusondeleyo impendulo efanelekileyo, kodwa into esiya kuqhubeka siyenza, akukho mbuzo malunga nayo, kukuma kunye ne-UAE, ukuma neSaudi Arabia, kwaye sibambe iinkokheli zeHouthi ezijongene nolu hlaselo lwabanqolobi.
UMBUZO: Ewe, Ned, ukulandelela nje, amanqaku amabini angakumbi kulo mbandela: I-USA ikwathethile kwiingxelo zangaphambili - ukusuka kwiSebe leSizwe ndiyakholelwa, kunye ne-White House - ukuba iya kuxhasa i-UAE ekukhuseleni imimandla yayo. Ke le nkxaso iza kutyhileka njani ngokwendlela esebenzayo? Yenye leyo. Okwesibini, ngaba i-US iya kunceda ekuthinteleni ukuhamba kweengalo kunye nenkxaso yemali kwiHouthis, ngenxa yokuba baxhaswa kwaye baxhaswa yi-Iran?
Mnu PRICE: Ke kumbuzo wakho wokuqala, sisebenza kakhulu namaqabane ethu ase-Emirati, njengokuba sisenza kumaqabane ethu aseSaudi, ukubabonelela ngezinto abazidingayo ukuze bazikhusele kolu hlobo lohlaselo. Siza kuqhubeka sikwenza oko. Siza kuqhubeka sisebenzisana nabo ngeendlela ezahlukeneyo ukubanceda bazomeleze kolu hlaselo.
Kwaye umbuzo wakho wesibini malunga -
UMBUZO: Ewe. Ngaba i-US iya kunceda ekuthinteleni ukuhamba kwezixhobo kunye nenkxaso yemali kwiHouthis, ngenxa yokuba baxhaswa yi-Iran?
Mnu PRICE: Ngokuqinisekileyo. Kwaye siye sasebenza nzima kuloo nto, kungekuphela kolu lawulo kodwa nakulawulo olulandelelanayo. Uvile amaqabane ethu kwiSebe lezoKhuselo ethetha ngokubanjwa elwandle, umzekelo, izixhobo eziye zaya eYemen nakwiHouthis. Usibonile sikhanyisa ukukhanya okuqaqambileyo kwinqanaba lenkxaso enikezelwa yi-Iran kunye namaqela axhaswa yi-Iran kwiHouthis. Usivile sithetha ngendima yokuphelisa uzinzo edlalwa yi-Iran kunye nabaxhasi bayo kuwo wonke ummandla, kwaye ngokuqinisekileyo ibandakanya eYemen, kwaye oko kubandakanya inkxaso ye-Iran kwintshukumo yeHouthi eYemen.
UMBUZO: Umbuzo ngulo: Ngaba uya kumisa ukuhamba kwezixhobo ngokwasemzimbeni? Ndithetha ukuthi, ngaba uhamba (ungavakali) amandla ezixhobo? Ndithetha ukuthi, ndicinga ukuba yintsusa yombuzo leyo.
Mnu PRICE: Ewe, kwaye impendulo yam kuloo nto yayingu-ewe, siza kuqhubeka nokwenza konke esinako ukumisa ukuhamba kweengalo, uncedo, lwe-
UMBUZO: Ke sinokubona, njengokuhlaselwa komoya waseMelika ukumisa ukuhamba kweengalo?
Mnu PRICE: Ndiyaxolisa?
UMBUZO: Ngaba kunokwenzeka ukuba sibone uhlaselo olujoliswe ukumisa ukuhamba kwezixhobo ngamabutho aseMelika?
Mnu PRICE: Uzibonile izenzo ezingaguqukiyo yinxalenye yolu lawulo kunye nolawulo lwangaphambili lokumisa ukuhamba kwezixhobo, ukumisa ukuhamba kwezinto ezithunyelwa kwiiHouthis, kwaye ngokuqinisekileyo oko kubandakanya into ebonelelwe ngama-Irani.
UMBUZO: Ned, eRashiya. Ngoko kuya kubakho-
UMBUZO: - umnxeba kunye nabaseYurophu malunga (engavakaliyo) -
Mnu PRICE: Ewe, uxolo, masivale - masivale iYemen, kwaye emva koko siza eRussia.
UMBUZO: AbakwaHouthis babanga ukuba bebejolise kwisiseko somoya saseMelika e-UAE izolo, kwaye umkhosi wase-US uthe bagxothe amaPatrioti abambe imijukujelwa yabo. Ngaba kuya kubakho ukusabela kwe-US kwiHouthis, kwaye ngakumbi ukuba bajolise kwimikhosi yase-US kwi-UAE?
Mnu PRICE: Siza kuqhubeka ukubamba iiHouthis ukuba ziphendule ngolu hlaselo lwabanqolobi. Siya kukwenza oko ngeendlela ezahlukeneyo. Sele sisebenzise izixhobo ezininzi, kwaye ndiyakrokrela ukuba uya kusibona siqhubeka sikwenza oko kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
UMBUZO: Enye enye eYemen.
Mnu PRICE: Kuqiniseke.
UMBUZO: Ngaba i-US ifikelele nakwesiphi na isigqibo esahlukileyo malunga nokuba ifuthe lokunikezelwa koncedo liya kuba yintoni ngokutyunjwa? Kwaye ukuba akunjalo, kutheni ukuzonwabisa ngale ngcamango?
Mnu PRICE: Ewe, sithethathethana nabanye baba bathathi-nxaxheba bendibakhankanyile ngaphambili ukuze siqhubeke nokuva izimvo zabo, ukufumana iimbono zabo. Ngokuqinisekileyo ezinye zeenkxalabo esizive malunga nonyaka odlulileyo zisasebenza. Umbuzo ngowokuba ingaba singakwazi na – ukuba ukumiselwa ngokutsha kuya kuba – kuya kuba kumdla wase-United States, kube kumdla wethu wokhuseleko, kuya kuba kukhuseleko lwamaqabane ethu kulo mmandla, kwaye kuya kuba kumdla. sinokubona ukuphela kongquzulwano kunye nengxakeko yobuntu eYemen.
Ngoko bekunzima - liqela elinzima leengongoma esizilinganiselayo, kodwa njengoko watshoyo uMongameli, sicinga - sithathela ingqalelo isigqibo.
Ngaba ikhona enye into eYemen? Humeyra.
UMBUZO: Kulungile. Thatha zibe mbini. ERussia, ke kuya kubakho umnxeba kunye nabantu baseYurophu ngale mvakwemini kunye noMongameli uBiden. Bendizibuza- oku bekubuzwa kwingcaciso emfutshane ye-White House ngokunjalo, kodwa ukuba unokukhanyisela kancinci kwinto abaphathi abanethemba lokuyifumana ngalo mnxeba. Kwaye simvile uMongameli uBiden kwiveki ephelileyo evuma esidlangalaleni iintanda ngaphakathi kwe-NATO Alliance kunye nabemi baseYurophu malunga nokuba- baphendule njani kanye kanye. Ngaba kukho ukuphucuka ukususela ngoko kunye nabantu baseYurophu? Ngaba usondele ekubeni kwiphepha elinye? Kwaye ngaba kukho nasiphi na isizathu sokuba silindele ukuba emva kolu mnxeba uya kuba luhlobo olungakumbi kwiphepha elifanayo malunga nendlela yokusabela ekuhlaselweni okuncinci, okanye ukuhlaselwa okukhulu, nokuba yintoni na?
Mnu PRICE: Kulungile. U-Humeyra, njengoko uyazi, besiseYurophu kwiveki ephelileyo. SasiseKyiv. Emva koko saya eBerlin, apho ukongeza ekudibaneni namahlakani ethu aseJamani uNobhala wafumana ithuba lokudibana ne-European Quad ebizwa ngokuba yi-Quad. Ngaphambi koko, besiseYurophu kwinyanga edlulileyo apho siye safumana ithuba lokuhlangana namaqabane ethu e-NATO, kunye ne-OSCE. Kwiiveki ezingenelelayo, uNobhala, uSekela Nobhala, uNobhala weSizwe kwiMicimbi yezoPolitiko, engasathethi ke ngoMongameli kunye noMcebisi wezoKhuseleko weSizwe kunye nabanye abaninzi babesemnxebeni rhoqo kunye namahlakani kunye namaqabane ukuba baxoxe ngolu bundlobongela baseRashiya impendulo.
Kwaye ndifuna ukuthatha umba ngomba wombuzo wakho kuba kuzo zonke ezi ndibano-uthethathethwano nomntu, iincoko, iinkomfa zevidiyo-kuzo zonke ezi ndibano, sivile, kwaye nawe uvile. kungekuphela kuthi kodwa kubalingane bethu baseYurophu kunye namaqabane ethu, i-NATO, i-OSCE, i-G7, i-European Union, i-European Council - uvile umyalezo ofanayo: Ukuba nayiphi na imikhosi yaseRashiya ihamba ngaphesheya komda, oko kuhlaziywa. uhlaselo; kuya kuhlangatyezwana nempendulo ekhawulezileyo, eqatha, nemanyeneyo kwicala laseUnited States nakumahlakani ethu.
Ngoko ke, akukho mathandabuzo ngaloo nto. Akukho mbaxa. Akukho kukhanya kwasemini. Siyayazi loo nto. Kwaye okubalulekileyo, iRussian Federation iyayazi loo nto.
UMBUZO: Kunene. Ngoko ke - kulungile, enkosi. Kukho ukukhanya kwemini, kodwa andizukonwabisa oko ixesha elide. Bendi- ndiyazibuza, ungasikhanyisela kancinci malunga nento enifuna ukuyifeza ngale ntlanganiso? Kwaye ke ndiya kudlulela kwi non-iphepha.
Mnu PRICE: Ewe, makhe ndibuyele kwintetha yakho ejijekileyo – kwaye mhlawumbi ibijongwe nje ukuba ibeyintetha ejijekileyo, kodwa andikwazanga ukuxhathisa.
UMBUZO: Hayi, qha, ndithetha ukuthi, uMongameli uye wathi kukho ukungafani kwezimvo, kwaye le nto ibe yinto esiye sadibana nayo. Siye sabona ntoni -
Mnu PRICE: Into oyivileyo kuMongameli, into oyivileyo kuNobhala, into oyivileyo kuMcebisi weSizwe wezoKhuseleko, into oyivileyo kwabanye kukuba xa kwenzeka ukuhlaselwa kweRashiya kwi-Ukraine, kuya kubakho impendulo. Iya kukhawuleza; kuya kuba nzima. Kwimeko yokuhlaselwa, kuya kuba yinto engazange ibonwe ngaphambili ngokwemiqathango yamanyathelo esilungele ukuwathatha.
Kwaye ungatsho ukuba kukho ukukhanya kwemini, kodwa ndiyathemba ukuba ujonge kwaye uphulaphule iingxelo eziye zavela kwiinqununu zaseYurophu, iingxelo eziye zavela kwi-NATO, kwi-OSCE, kwi-G7, kwiKhomishini yaseYurophu. ukusuka eUnited States, ukusuka kumahlakani ethu emi ecaleni kukaNobhala uBlinken, nokuba nguMphathiswa Wezangaphandle uBaerbock, nokuba yayingamanye amahlakani kunye namaqabane esidibene nawo kwiiveki zamva nje nakwinyanga ezimbini ezidlulileyo.
Ngoko umntu unokubanga ukuba kukho ukukhanya kwemini; kodwa ngokuqinisekileyo, ukuba ujonga umthamo kunye nezinto ezibalaseleyo ngaphakathi kwirekhodi yoluntu, ndicinga ukuba oko kuya kuyikholelwa loo nto.
UMBUZO: Ngaba nina niza kuthumela eli lingelophepha, njengale veki? Ngaba ungathetha kancinci malunga nobuchwephesha baloo nto, ukuba ingaba yintoni na?
Mnu PRICE: Ke njengoko uNobhala etshilo ngoLwesihlanu, silindele ukuba sibe kwimeko yokuthumela impendulo ebhaliweyo kule veki. Ngaphambi kokuba senze loo nto, kunye nento esiyenzayo ngoku - kwaye oku kufikelela kumbuzo wakho wangaphambili malunga nokuzibandakanya kunye namahlakani ethu aseYurophu kunye namaqabane ethu - into ebesiyenza, njengoko usazi nanjengoko ubonile, luququzelelo oluqhubekayo kunye ukubonisana namahlakani ethu kunye namaqabane kwelinye icala leAtlantiki.
Besikwenza oku ngokwempendulo engazange ibonwe ngaphambili, ekhawulezayo, eyomeleleyo, eqatha, emanyeneyo enokuthi iRussia inyamezele xa iqhubeka nohlaselo, kodwa besikwenza oko kumxholo wempendulo ebhaliweyo esiza kuyinika. kwiRussian Federation, kanye njengoko besisenza oko siphendula kwinto ebesiyithetha malunga neendawo apho kunokubakho ukwenzeka kwenkqubela phambili kumanyathelo ahambelanayo anokuphucula ukhuseleko lwethu oludibeneyo. Kwaye ngokhuseleko oludityanisiweyo, ndithetha ukhuseleko loluntu oluwela iAtlantiki kodwa ndiyakwazi ukulungisa ezinye iinkxalabo ezibekwe yiRussia.
Ngoko njengoko siqwalasela inyathelo elilandelayo ekubandakanyekeni kwethu - kwaye oko, ngokwenene, ukunikezelwa kwempendulo ebhaliweyo kwi-Russian Federation - sabelana ngezo ngcamango kunye nathi - kwaye siye sabelana ngezo ngcamango kunye nabalingane bethu baseYurophu kunye namaqabane. Sithatha ingxelo yabo. Sidibanisa loo ngxelo kwimpendulo ebhaliweyo. Kwaye xa sikulungele ukuyihambisa, siya kwenza njalo. Ndilindele ukuba oko kube kule veki.
UMBUZO: Ned, ke uthe akukho kukhanya kwemini kwimpendulo, kwaye siya kuyibona loo nto. Kodwa kukho ngokucacileyo - kwaye kusesidlangalaleni phaya - ukukhanya kwemini ekubonakalisweni kwesoyikiso. Abantu baseYurophu, abaFrentshi, kunye nabanye, uMnu. Borrell, babonakala becaphukile sisithonga esothusayo eWashington malunga nesoyikiso esisondelayo, kwaye bona - bebesithi akufuneki sifumane ukuphazamiseka kwengqondo, siye sanexhala. ukuzola, kwaye asiboni ukuba isoyikiso sisondele njengoko i-US isitsho. Ngaba usatsho ukuba kukho - kukho isoyikiso sokuhlasela? Kutheni kukho lo mahluko phakathi kwakho nabaseYurophu?
Mnu PRICE: Francesco, asiwuboni umahluko obhekisa kuwo.
UMBUZO: Bayayithetha. Bathetha esidlangalaleni ukuba -
Mnu PRICE: Into esiyibonayo kunye nento oyibonayo nazo ziingxelo. Kwaye iingxelo - ingxelo ethi, umzekelo, ivela kwiKhomishoni yaseYurophu eyathi ngokumangalisayo okufanayo ukuba akunjalo - ukuba ayifani nolwimi olufanayo kwingxelo ephuma kwi-G7 kwi-NATO malunga nemiphumo eya kwehlela i-Russian Federation kweso siganeko. yolo gonyamelo nxamnye neUkraine. Kuye - oku akubanga yi-United States kuphela eyenza eli tyala. Besithetha njengekhorasi kunye nabalingane bethu baseYurophu kunye namaqabane, kunye namaziko ahlukeneyo kunye namaqumrhu afana ne-NATO kunye ne-OSCE kunye ne-G7. Kwaye kwakhona, ukuba ujonga ulwimi - kwaye awusayi kumangaliswa kukuva ukuba oku bekungeyonjongo - uya kubona ulwimi olufanayo ngokumangalisayo kuwo wonke amahlakani ethu kunye namaqabane kunye nakumaziko ahlukeneyo.
Xa kufikwa kwinto ecwangciswe ngamaRashiya, kucacile njengemini ukuba nabani na unokubona ukwakhiwa kwemikhosi yaseRussia ecaleni kwemida yaseUkraine. Siye sacaca kakhulu malunga neenkxalabo zethu xa kufikwa kwezinye iindlela zobundlobongela kunye nokuxhokonxa abantu baseRussia abanokufuna ukuzithatha kwaye sele bezithathile. Kodwa mnye kuphela umntu owaziyo ukuba iRussian Federation iyigcinele ntoni iUkraine, kwaye nguVladimir Putin.
Injongo yethu ibe kukunqanda kunye nokukhusela kuzo naziphi na izicwangciso ezinjalo, njengoko sikulungele ukuqhubeka nendlela yokudibanisa kunye nengxoxo. Usibonile siqhubeleka sisehla ngala ndlela yezozakuzo kunye nengxoxo ngenyani nangendlela engagungqiyo kwezi veki zidlulileyo. Uhambo lukaNobhala oluya eGeneva ekugqibeleni kwiveki ephelileyo yayilinyathelo lamva nje kule nkqubo ethe yabandakanya uSekela Nobhala kwiintlanganiso zakhe kunye neRussian Federation kwiNgxoxo yeSicwangciso soZinzo, iintlanganiso kwiBhunga le-NATO-Russia, uthethathethwano kumxholo. ye-OSCE, kunye namanye amahlakani nawo asebenzisana neRussian Federation ukuza kuthi ga ngoku.
Ke ukuze sicace kakhulu, sikulungele ukuqhubeka nokuhamba ngale ndlela. Le ndlela inokuphumelela kuphela ukuba iyenzeka kumxholo wokwehla. Kodwa ngenxa yokuba silungile kwaye sizibandakanye kwinkqubo kunye nendlela yediplomacy kunye nengxoxo ayithethi ukuba asizilungiselelanga ngokhuselo kunye nokuthintela. Senza zombini ngexesha elinye ngokuchanekileyo kuba sikulungele nokuba kukhetho olwenziwa nguVladimir Putin.
UMBUZO: Kwaye ucinga ukuba kukho isoyikiso sokuhlaselwa, ukuba uhlaselo lunokuba lusondele, ngoko nangoko, njengoko abantu baseYurophu besithi ubaxelela, ngokobukrelekrele bakho?
Mnu PRICE: Ewe, siye sacaca malunga noku kulo naliphi na inani leendawo, kubandakanywa nengcebiso ye-consular esiyikhuphe phezolo. Isoyikiso esisibonayo asicacanga kuthi kuphela kodwa sicace nakuwuphi na umntu obukeleyo oqhelekileyo xa sijonga okwenzekayo kwimida yaseUkraine, okwenzekayo kwindawo efanele ukuba yintsimi yaseBelarusian, sisizathu sokukhathazeka okukhulu. Kwaye ke sithatha amanyathelo alumkileyo. Thina, ngokuqinisekileyo, sabelana ngolwazi kunye nobukrelekrele kunye namaqabane ethu athetha ngokusikhathazayo kwaye sithetha nokuba amaRussia ngokuqinisekileyo abonakala ekulungele ukwenza isenzo esiqatha ngokuchasene ne-Ukraine nangawuphi na umzuzu.
UMBUZO: Kodwa ukulandela inqaku likaFrancesco -
UMBUZO: Kwaye nje enye yokugqibela. Ngaba kufuneka silindele ukudibana okutsha okanye intlanganiso okanye intlanganiso ebonakalayo phakathi kukaNobhala kunye noMphathiswa Wezangaphandle uLavrov emva kwempendulo yamva nje?
Mnu PRICE: Ewe, uvile kuMphathiswa wezangaPhandle kwiveki ephelileyo. Nivile nakuNobhala kwiveki ephelileyo ukuba siza kunika impendulo ebhaliweyo. Sivuleleke kunxibelelwano olongezelelweyo, uthethathethwano lomntu, ukuba lunokuba njalo-ukuba lubonakala luluncedo ukuba sicinga ukuba lunokwakha, ukuba sicinga ukuba lufanele lube yinto elandelayo njengoko siqhuba indlela yengxoxo kunye nediplomacy. Ngoko sivulelekile kuyo.
UMBUZO: Ukulandela imibuzo kaFrancesco, kwimizuzu embalwa edlulileyo isithethi sePentagon sathi, kwaye ndicaphula apha, ukuba i-NATO kufuneka isebenze i-NRF, bonke baxelele inani lemikhosi ebekwe nguNobhala uMnumzana Austin kwisilumkiso esiphakamileyo. malunga nabasebenzi abangama-8,500. Kuloo nto-kuloo mda, owayesakuba ngunozakuzaku wase-US e-Ukraine uJohn Herbst uxelele i-NPR ngale ntsasa ukuba ucinga ukuba nayiphi na intetho yokuba imikhosi yase-US ithunyelwe ngaphambili njengesithintelo esongezelelweyo bekufanele ukuba yenziwe ngaphambili ngoku. Kutheni le nto ifikile kule mpelaveki ukuba abalawuli beBiden bathathe isigqibo sokubeka imikhosi yase-US kwindawo ebekwe phambili njengenxalenye ye-NATO ukuthumela umyalezo ku-Vladimir Putin?
Mnu PRICE: Ewe, mandenze amanqaku ambalwa. Okokuqala, ndiza kuyeka kumlingane wam kunye nomanduleli wam ukuba athethe nezicwangciso iPentagon esebenza phezu kwazo, kodwa uMongameli uye wacaca gca malunga neziphumo eziya kwehlela iRussian Federation ukuba iRussia ibinokuqhubela phambili ngogonyamelo olongezelelweyo. ngokuchasene neUkraine. Sithethe ngeziphumo zoqoqosho kunye nezemali eza kunyamezela i-Russia ezinokuthi ngeendlela ezininzi zibe yinto engazange ibonwe ngaphambili, amanyathelo esiye sakhetha ukungawathabathi emva kowama-2014. singakulungela ukubonelela amaqabane ethu ase-Ukraine, ngaphezulu nangaphaya kwe-650 yezigidi zeerandi esibonelele i-Kyiv kulo nyaka uphelileyo kuphela. Olo luncedo lokhuseleko olungaphezulu kunolwakhe lwabonelelwa ngonyaka omnye kumahlakani ethu eUkraine.
Kodwa uMongameli uye wacaca ukuba ukuba amaRashiya aye phambili, siya kugxininisa into ebizwa ngokuba yimpuma ye-NATO. Kodwa nanjengoko besesitshilo, asizange sikuthintele ukhetho lokubonelela ngoncedo olongezelelweyo kwangaphambi kohlaselo olunokwenzeka. Kwaye ke kukho inani leziphumo esizichazile ukuba iRussian Federation iya kunyamezela. Kukho inani lamanyathelo esiwathathayo ngoku malunga noncedo lwethu lokhuseleko oluya eUkraine, ngokwemiyalezo ethintelayo esiyibeka phambili malunga neziphumo eziya kwehlela iRussian Federation, kwaye ngoku le uyivayo. kumlingane wam ePentagon.
UMBUZO: Ukulandela oko, ngaba ezi ngxoxo malunga nokusebenzisa imikhosi yase-US- ngaba oko kube yinxalenye yempendulo eqhubekayo kulawulo lweBiden ngaphambi kokuba ezi ngxelo zaziwa esidlangalaleni kule mpelaveki? Ngaba leyo yayiyinxalenye esebenzayo yengxoxo malunga nendlela yokujongana nohlaselo lwaseRashiya?
Mnu PRICE: Ndingatsho ngokubanzi, ngaphandle kokuthetha kwiingxoxo zangaphakathi, ukuba into efana nale ayizukuvela esidlangalaleni ukuba ibinokwaziswa nje. Besithathela ingqalelo inani lamanyathelo, kwaye uva iPentagon ithetha esidlangalaleni kuyo namhlanje. Inyani yokuba bathetha esidlangalaleni kuyo namhlanje ibonisa ukuba ayisiyonto intsha njengoko sijonga impendulo kule nto siyibonayo ngoku.
UMBUZO: Ngaba le yenzelwe ukwenza amaRussia mhlawumbi acinge ngokutsha ukuthunyelwa kwemikhosi eyongezelelweyo ngaphakathi kweBelarus kwaye izama ukuqinisa ubukho bayo kumazantsi eUkraine?
Mnu PRICE: Injongo yethu kuko konke oku kukukhusela kunye nokunqanda. Ngoko sithatha amanyathelo amaninzi ekukhuseleni i-Ukraine, kubandakanywa nokubonelela ngoncedo lokukhusela olukhuselayo, kodwa ukuthatha amanyathelo amaninzi okuthintela oko iRussian Federation kunye nokuba yintoni uVladimir Putin anokuthi acinge ngayo. Ngoko kumbuzo wakho, ewe.
UMBUZO: Kwaye enye enye: Unozakuzaku waseMelika kwi-UN wenze isishwankathelo kwangoko namhlanje, kwaye umbuzo uye wavela ukuba zeziphi iincoko ebenazo namanye amalungu eBhunga lezoKhuseleko malunga nale meko, kwaye uMmeli uThomas-Greenfield wade wamvumela ukuba ebethetha nogxa wakhe waseRussia. Utyholwe ngelithini kuNozakuzaku uNebenzya malunga nesigrogriso esibonwa yi-US kulawulo lwaseUkraine? Kwaye kutheni i-US ingatyhalanga intlanganiso yeBhunga lezoKhuseleko ngalo mbandela ngaphambi kokuba iRussia ithathe ubongameli ngoLwesibini ozayo?
Mnu PRICE: Ewe, ndiyacinga ukuba nawe uvile kuMthunywa ukuba ebethethane kakhulu nabalingane bakhe kwiBhunga lezoKhuseleko kunye neqela elibanzi labalingane bakhe kwi-UN. Uye wavuma ukuba ebenxibelelana nogxa wakhe waseRussia, kodwa ndiyakuqinisekisa-kwaye ndiyacinga njengokuba nawe uvile kuye - ukuba iqabane lakhe laseRussia ayikuphela kweqabane athetha nalo. Kwaye ndingalindela ukuba ungeva kuye ukuba uthethathethwano lwakhe namahlakani ethu, kuquka lawo akwiBhunga lezoKhuseleko, kunye namaqabane ethu luye lwanda kakhulu kunokuba uthethathethwano lwakhe nogxa wakhe waseRashiya kwiBhunga lezoKhuseleko.
Kodwa malunga nomyalezo, umyalezo amaRussia ebesiva kuthi ucacile kwaye nawo ubungaguquguquki. Kuye kwacaca kwaye kuhambelana esidlangalaleni; kuye kwacaca kwaye kuyahambelana ngasese. Okokuqala nokuphambili, sikhetha indlela yediplomacy kunye nencoko. Sikholelwa ukuba kuphela kwendlela enoxanduva lokulandela ukuthotywa kunye nokuphelisa uhlaselo oluqhubekayo lwaseRussia ngokuchasene neUkraine kwaye yintoni - naziphi na ezinye izicwangciso iRussian Federation enokuba nazo. Bavile kananjalo-kwaye bayivile le nto kuthethathethwano lwethu lwabucala, kodwa nasesidlangalaleni ngokunjalo-ukuba kanye njengoko silungiselela iingxoxo kunye nediplomacy, sisukela ukhuselo kunye nokuthintela, kwaye sithethe naloo nto. kakhulu namhlanje. Kodwa amaRashiya ayazi, kuba ayivile kuthi ngokuthe ngqo, ukuba sikulungele ukubandakanya. Bayazi ukuba kukho imiba apho sicinga ukuba iingxoxo kunye nediplomacy zingaphinda zibuyele ngokufanelekileyo kukhuseleko lwethu oluhlangeneyo, ukhuseleko oluhlangeneyo loluntu lwe-transatlantic, kwaye lunokunceda ukuphendula kwezinye iinkxalabo ezenziwe yiRussian Federation.
Kodwa nabo bavile kuthi, kwaye oku kubaluleke kakhulu, ukuba kukho ezinye iindawo, kuquka umgaqo-nkqubo we-NATO "Open Door", apho kungekho ndawo yorhwebo. Akukho nanye. Ke ngoko kuzo zonke iindibano zethu, nokuba nguNobhala, uSekela Nobhala, u-Ambassador Thomas-Greenfield, loo miyalezo icacile kwaye ihambelana.
UMBUZO: Ned, ndifuna ukutshintsha izihloko.
Mnu PRICE: Nantoni na eyenye ekhoyo - kulungile, ndiyabona kusenokubakho eminye imibuzo embalwa. uBen.
UMBUZO: Ewe, ukukhutshwa kwenxalenye ye-ambassy kubonisa ngokucacileyo ukuba unenkxalabo malunga nokhuseleko lwabantu baseMelika e-Ukraine. Kwaye uye wakwenza kwacaca ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba iRussia inokuhlasela. Ngaba uyakuthatha eli thuba ngoku ukulumkisa iRussia ngokuchasene nokwenzakalisa nabaphi na abantu baseMelika kwaye uchaze ukuba ingaba yintoni isiphumo xa benokwenza?
Mnu PRICE: Ngoko ke mandithathe loo mbuzo kwaye ndicacise ukuba akukho nto ibaluleke kakhulu kunokhuseleko kunye nokhuseleko lwabantu baseMelika kwihlabathi jikelele. Kwaye phezolo usivile sithetha ngamanyathelo alumkileyo esiwathathayo kwimeko yozakuzo lwethu lwaseKyiv, sisazi ukuba amaRussia anolwakhiwo olukhulu lomkhosi, ukuba angakulungela ukuthatha inyathelo elinobundlongondlongo nangawuphi na umzuzu. Kwaye ke ukumka okugunyazisiweyo kwabasebenzi abangengabo abangxamisekileyo kwi-ambassy yethu kunye nokuhamba okuyalelweyo kwabo baxhomekeke kuyinxalenye kunye nomboniso weyona nto ibalulekileyo esiyincamathela kukhuseleko kunye nokhuseleko lwabantu baseMelika.
Andifuni ukuya kwiingxoxo zabucala, kodwa siyenze yacaca kakhulu kubantu baseRussia eyona nto iphambili esiyincamathele kukhuseleko nokhuseleko lwabantu baseMelika. Bayazi ukuba le yeyona nto iphambili kuthi. Bayazi ukuba senza umgama ongaqhelekanga ukukhusela ukhuseleko nokhuseleko lwabo. Kwaye ndiza kuyiyeka.
UMBUZO: Ngokwamanani abantu, abantu baseMelika ngaphakathi eUkraine, izolo ndiyazi ukuba iSebe likaRhulumente alizukutsalwa kumanani achanekileyo. Kodwa ngaba kungenxa yokuba awazi ukuba bangaphi okanye awuzukutsho ukuba bangaphi abantu baseMelika abangaphakathi eUkraine?
Mnu PRICE: Injongo yethu ihlala ikukubonelela ngolwazi olusexesheni noluchanekileyo, kwaye ngoku asinalo-isibalo esicinga ukuba sichanekile kwinani labantu baseMelika, abantu baseMelika babucala, abahlala eUkraine, kwaye ndiza kuxela. wena kutheni. Ukuvile oku kumxholo we-Afghanistan, kodwa xa abantu baseMelika behambela phesheya, ewe, akufuneki babhalise kwi-ambassy yelizwe. Sihlala sibakhuthaza abantu baseMelika ukuba babhalise xa behamba kumazwe aphesheya ngenkqubo yethu ebizwa ngokuba yi-STEP, kodwa ndicinga ukuba uninzi lwenu lungangqina, xa usiya phesheya kweelwandle awunakuhlala usenza oko. Kwaye abanye benu mhlawumbi abazange bayenze loo nto.
Ngokufanayo, xa abantu baseMelika belishiya ilizwe, kuya kufuneka bazicime. Kwaye ke ngenxa yokuba abaninzi banokungabhalisi kwasekuqaleni, ndicinga ukuba luqikelelo olukhuselekileyo lokuba uninzi-abo bathe babhalisa basenokungazisusi kuhlanga lwabemi baseMelika abanokuba ngabahlali kwilizwe lasemzini.
Enye ingongoma kukuba naxa abantu bebhalisa, iSebe likaRhulumente alikho kwimeko yokuqinisekisa ngokuzimeleyo ukuba umntu obhalise kwi-STEP, ebizwa ngokuba yi-STEP system, ngokwenene ungummi waseMelika. Ke kukho inani - ngenxa yezizathu ezininzi, inani - asinalo manani achanekileyo okwangoku.
Xa sithumele umyalezo nabantu baseMelika-kuluntu lwabucala lwabemi baseMelika e-Kyiv, e-Ukraine kwezi ntsuku zidlulileyo, sibakhuthaze ukuba bagcwalise ifomu eya kusinceda sifumane ubungakanani obukhulu kubukhulu be-American - yabucala yabemi baseMelika. eUkraine. Kodwa ayisiyiyo into esinayo ngoku.
UMBUZO: Kwaye enye ngaphezulu. Ukhankanye iAfghanistan. Ndiyazibuza ukuba ngaba kukho into evela e-Afghanistan oyifundileyo malunga nokuchonga kunye nokuhlangula abantu baseMelika ngaphakathi kwendawo yemfazwe ocinga ukuba ingasetyenziswa apha?
Mnu PRICE: Ewe, ezi ngokucacileyo ayizizo iimeko ezifanayo, kwaye ke ndingakuthiya ukucebisa ngenye indlela. Intlawulo yethu ephambili kukugcina uluntu lwaseMelika lusazi ngokhuseleko nophuhliso. Yiloo nto ebesiyenza kutsha nje izolo ngokuhlwa xa besikhupha iNgcebiso yokuHamba ehlaziyiweyo kunye ehamba neMedia Note ukubagcina besazi ngokhuseleko nophuhliso. Kwaye oko kunokubandakanya ulwazi kwiinketho zokuhamba zorhwebo.
Senze oku kuba, njengoko uMongameli etshilo, imikhosi yaseRussia inokuza nangaliphi na ixesha. Kwaye sonke siyazi kwaye sonke sibone iimpawu zokuba kunjalo, xa sinikwa ukwakhiwa komkhosi omkhulu. Siye sacaca ukuba asizukwazi ukubakhupha abemi base-US, abemi babucala base-US, kwimeko enjalo. Yiyo loo nto sikhuthaze abemi babucala base-US abanokuba base-Ukraine ukuba bacwangcise ngokufanelekileyo, kubandakanywa nokuzifumana kwiinketho zorhwebo xa bekhetha ukulishiya ilizwe. Nangona sinciphisa ubungakanani bendawo yethu yozakuzo, i-ambassy ikhona ukunceda abemi baseMelika kule nto. Sikwi-sinakho ukubonelela, umzekelo, imali-mboleko yokubuyisela kubo nabaphi na abantu baseMelika abafuna ukuzifumana kwezo ndlela zorhwebo ukuze babuyele eUnited States.
UMBUZO: Ned -
UMBUZO: Ngaba ndingalandela kwi-
UMBUZO: Ukuba awunangxaki.
UMBUZO: Okokuqala, yintoni ofuna ukuyiphumeza kwindibano-ekunye neBiden kunye neenkokeli zaseYurophu? Kuqikelelwa ukuba yakha phezu kwentlanganiso kaMnu. Blinken ngale ntsasa. Ke ufuna ukufezekisa ntoni kuloo nto?
Ababini, kwintlanganiso namhlanje ekuseni ukuba uMnu Blinken wayenayo kunye neBhunga laseYurophu, ngaba wafumana imibuzo malunga nesigqibo sase-US sokuqalisa ukunciphisa i-ambassy? Ngenxa yokuba abanye abantu baseYurophu abekho kwiphepha elifanayo, kwaye njengoko uFrancesco wayethetha, sicebisa ukuba i-rhetoric idinga ukudayilwa kancinci, ukuba akukho mahluko kukhuseleko ukubonisa ukuhlaselwa okuzayo. Ngoko ulindele ukufezekisa ntoni, kwaye uMnumzana Blinken wakuva ntoni malunga nendlela yaseMelika?
Mnu PRICE: Ke njengoko ubutshilo, uBarbara, uNobhala uthathe inxaxheba kwangoko namhlanje kwiBhunga leMicimbi yezaNgaphandle ye-EU. Wamenywa nguMmeli oPhezulu we-EU uJosep Borrell. Ukukunika incasa yaloo nto, uNobhala wazise oogxa bakhe kutyelelo lwakhe kwiveki ephelileyo eKyiv, eBerlin, naseGeneva. Njengenxalenye yeenzame, siye sathetha – ukuthomalalisa ukruthakruthwano olubangelwe kukuqokelelwa komkhosi wase-Russia ngaphandle kwesizathu kunye nokuhlasela kwayo i-Ukraine.
Kuthethathethwano ngale ntsasa, uNobhala ugxininise ukuba siza kuqhubeka nokunxibelelana ngokusondeleyo ne-EU kunye namazwe angamalungu ayo ukongeza kwamanye amaziko ahlukeneyo esele siwakhankanyile. Leyo yi-NATO, yi-OSCE leyo, kunye namahlakani kunye namaqabane. Kwaye ekuhambeni kwale ntlanganiso, uNobhala ubonise oko ngokubaxelela ngothethathethwano kwiveki ephelileyo, ewe, kubandakanya uthethathethwano noMphathiswa Wezangaphandle uLavrov.
Ubonile ukuba kamsinya nje emva kwentlanganiso kunye noMphathiswa wezangaPhandle uLavrov equkunjelwe ngoLwesihlanu, unobhala waphinda wafumana ithuba lokuthetha nogxa wakhe waseUkraine ukuba amchazele ngezo ngxoxo, kwaye luqheliselo esilwenzileyo kulo lonke ixesha. uthethathethwano lwethu - kunye namaqabane ethu aseYurophu, amaqabane ethu aseYurophu, ngokuqinisekileyo kuquka namaqabane ethu ase-Ukraine, kuba sisebenza ngomlinganiselo ongenanto malunga nabo ngaphandle kwabo. Akukho nto malunga neUkraine ngaphandle kweUkraine. Akukho nto malunga neYurophu ngaphandle kweYurophu. Akukho nto malunga ne-NATO ngaphandle kwe-NATO.
Ngoko ukuba nenxaxheba kukaNobhala entlanganisweni namhlanje ibe lelinye ithuba lokuba senjenjalo kwenye indawo. UMongameli, ewe, uzibandakanye ngokunzulu nako. Ubonile ukuba ubize iqela lakhe, zombini emntwini kwaye phantse, eCamp David ngempelaveki ukuxoxa ngale nto. Ngoko ke akufanele kumangalise ukuba uMongameli afumane ithuba lokuthetha nogxa wakhe ngale miba kanye ngaloo miba ifanayo – ecinga kwaloo mgaqo.
Xa kufikwa kwisigqibo esithe sasenza phezolo, ndifuna nje ukuphinda inqaku eliphambili, kwaye le nto imalunga nekhrayitheriya enye kunye nomgaqo omnye wedwa, kwaye lukhuseleko kunye nokhuseleko lweqela lethu emhlabeni eUkraine. . Kwaye yayilinyathelo lobulumko xa kufikwa kumyalelo wokunduluka kwabaxhomekeke kubo. Yayilinyathelo lobulumko xa kufikelelwa ekuphumeni okugunyazisiweyo kwabasebenzi abangabalulekanga.
Kodwa mandikucacele ukuba eso sigqibo asithethi nto malunga nokuzibophelela kwethu kulawulo lwase-Ukraine nakwisidima sayo sommandla. Ukuzinikela kwethu kulawulo lwaseUkraine kunye nemfezeko yommandla akugungqi. I-ambassy iyaqhubeka nokusebenza kwaye intlawulo, ngokuqinisekileyo, ihlala e-Ukraine. Inyani yokuba sithatha amanyathelo obulumko ngenxa kunye nokhuseleko lwabemi base-US nangayiphi na indlela ayijongeli phantsi inkxaso yethu okanye ukuzinikela kwethu e-Ukraine. Ubonile ukuba inkxaso ithatha naliphi na inani leefom.
Ngokuqinisekileyo, uNobhala wayeseKyiv kwiveki ephelileyo, apho wamva ephinda le miyalezo ecaleni kukaMongameli Zelenskyy, ecaleni koMphathiswa Wezangaphandle kuleba. Siye saqhubeka nokubonelela ngoncedo lokhuseleko lokhuseleko. Unikezelo lokuqala lwemali eyongezelelweyo yeedola ezingama-200 ezigidi egunyaziswe ngoDisemba yafika eKyiv ngobusuku bangoLwesihlanu ukuya ngoMgqibelo. Siza kuqhubeka nokubonelela ngoncedo lokhuseleko lokhuseleko kumahlakani ethu, kwaye siza kuqhubeka nokubonisa ngokungathandabuzekiyo ukuzibophelela okungapheliyo esinako kwisidima sommandla kunye nolongamo lweqabane lethu i-Ukraine.
UMBUZO: Ngaba ndingayilandela loo nto?
Mnu PRICE: Ndiyacela.
UMBUZO: Kuba uthe kwakhona linyathelo lobulumko, kodwa uRhulumente wase-Ukraine wayichasa ngokucacileyo le ntshukumo kwaye isebe lezangaphandle namhlanje belibiza ngokuba lilumke kakhulu. Ngaba kukho uluvo kulawulo lokuba oku kunokubangela unxunguphalo ngaphakathi eUkraine ngexesha apho kanye kanye iRussia izama ukuyenza ngokumisa ukungazinzi kweli lizwe?
Mnu PRICE: Oku kumalunga nento enye kunye nento enye kuphela, kwaye yona-
UMBUZO: Ngaba ukhe wacinga ngoloyiko olunokubakho?
Mnu PRICE: Ndiyaxolisa. Senze ntoni?
UMBUZO: Ngaba uye wacinga ngoloyiko olwalunokubakho?
Mnu PRICE: Into esiyiqwalaselayo lukhuseleko nokhuseleko lwabantu baseMelika. Kwaye esi sisigqibo esinokwenziwa nguRhulumente wase-United States kuphela kuba yinto ephambili esiyincamathele kukhuseleko kunye nokhuseleko, kule meko, oogxa bethu kunye neentsapho zabo ngokunjalo. Oku akuthethi nto kwinkxaso yethu engagungqiyo, engapheliyo kumaqabane ethu ase-Ukraine. Imalunga nenye into enye kuphela: eyona ngqwalasela emxinwa kakhulu yokhuseleko nokhuseleko koogxa bethu.
UMBUZO: Kodwa oku kudityaniswe nesibhengezo sePentagon namhlanje malunga nokubeka amajoni angama-8,500 XNUMX kwindawo yokulinda, ukongeza ekumisweni koluntu ngolwesiHlanu ngokufika koncedo olutsha olubulalayo, kubonakala ngathi uyalunyusa uxinzelelo lwakho apha eRussia ngandlela thile. Ngaba uyayikhaba loo nto? Ngaba ucinga ukuba ukuma kwakho kutshintshile konke konke?
Mnu PRICE: Oku kumalunga nokhuselo kunye nokuthintela. Into esiyixhalabeleyo kukuba kunokwenzeka ukuba iRashiya ihlaselwe. Loo nto ayithethi ngokuzikhusela. Loo nto ayithethi ngokuthintela. Oko kumalunga nezenzo ezikhubekisayo ngokuchasene nelizwe elizimeleyo, ilizwe elizimeleyo eliliqabane elisondeleyo lase-United States. Ke ukulinganisa ezi zinto zimbini akuchanekanga ngokunzulu, kwaye ikwayiloo nto kanye siyivayo eMoscow. Ezi ziziqalelo ezahlukeneyo ngokomgangatho kunye namanyathelo ahlukeneyo esiwathathayo. Ukuba amaRussia ebenokwehla, ubungayi kubona ngokuchanekileyo iseti efanayo yeentshukumo ezivela kumaqabane ethu ase-Ukraine, asuka eNATO, asuka eUnited States.
Nantsi ingongoma ebanzi, kwaye umvile uNobhala ephindaphinda le ngongoma. Ngokwenene kwintlanganiso kunye noMphathiswa Wezangaphandle uLavrov ngoLwesihlanu wenza oku ngokuthe ngqo, wenza le ngongoma ngokuthe ngqo kuMphathiswa Wezangaphandle. Kwaye wathi i-United States ngenene ayikuqondi ukuthunyelwa kweqhinga laseRussia apha kuba kuyo yonke le minyaka kunye nomxholo woku kunyuka, uVladimir Putin kunye neRussian Federation iye yamisa yonke into ebifuna ukuyithintela. Kwaye umvile uNobhala ethetha ngenkxaso eyandayo yobulungu be-NATO phakathi kwabantu base-Ukraine ukusukela ngo-2014, amanqanaba enkxaso athe aphinda kabini. Usivile kunye ne-NATO njengembumba sithetha kumanyathelo okuqinisekisa aqiniswe ngokuthe ngqo luhlaselo lwaseRussia olungaphendukiyo ngokuchasene ne-Ukraine ngo-2014.
Ke abantu baseRussia banokukhalaza kwaye banokuqaphela kwaye balathe kwezi nzame zokuzikhusela kunye nokuthintela, kodwa lugonyamelo lwabo oluye lwakhawulezisa kanye le nto siyivayo kwaye sibabona bekhomba kuyo.
Nantsi enye inkxalabo, kwaye asenzanga mathambo malunga noku: inkxalabo yethu yokuba amaRussia, njengoko ayenzile ngo-2014, anokufuna ukwenza isingxengxezo sohlaselo olongezelelekileyo ngokuchasene neUkraine. Ukuba ubufuna ukwenza oko, oku ngandlel’ ithile kuya kubonakala kunjani. Yiloo nto kanye eye yasixhalabisa kangangexesha elithile. Kungenxa yoko le nto siye sathetha kungekuphela nje loo nkxalabo ngokubanzi kodwa kutheni sibeke phambili ulwazi esinalo oluthetha ngamanyathelo anokuthi iRussian Federation iwathathele kwesi siphelo.
UMBUZO: Ndingaphinda ndifumane enye, nceda?
Mnu PRICE: Makhe ndimyeke uConor agqibezele.
UMBUZO: Hayi, kulungile. Umbuzo nje omnye wokugqibela ngokukodwa kumbuzo wobumbano lwe-NATO. Umphathiswa wezangaphandle wase-Ukraine waphinda wathi iJamani ijongela phantsi umanyano kwi-Alliance, ngokuyinxenye ngenxa yokuba ivalela i-Estonia ekugqithiseni izixhobo, abayi kubonelela ngezixhobo ngokwabo, izimvo ezivela kumphathi wabo wenqanawa ngempelaveki - okanye kwiveki ephelileyo. Ngaba unayo nayiphi na impendulo kuloo nto, le ngcamango yokuba iJamani ayenzi ngokwaneleyo ngaphakathi kwe-Alliance ukuxhasa umphambili odibeneyo?
Mnu PRICE: UNobhala waba nethuba lokudibana noChancellor Scholz kuphela kodwa kunye noMphathiswa Wezangaphandle uBaerbock kwiveki ephelileyo eBerlin, kwaye umphathiswa wezangaphandle wabuzwa lo mbuzo emi kanye ecaleni kukaNobhala. Kwaye wathetha ngokuchanekileyo into eyenziwa yiJamani, igalelo elibalulekileyo elenziwa yiJamani eUkraine. Ndiya kuyishiya eJamani ukuba ndithethe naloo minikelo ibalulekileyo. Kodwa ukuba kucace, akukho kukhanya kwemini phakathi kwamaqabane ethu kunye namaqabane ethu malunga nemiphumo emibi eya kwenzeka kwiRussian Federation ukuba iya phambili.
UMBUZO: Kuya kubonakala njani ukuhla?
UMBUZO: Inye kuphela into eUkraine, into yokugqibela eUkraine.
UMBUZO: Ngaba ukwehla-kuya kubonakala kunjani ukuhla? Ndiyathetha, ngaba banayo-ngoku, kutyholwa ukuba bane-100,000 yamajoni kwindawo yabo esecaleni komda. Ngoko ke ukuthotywa kuya kubonakala ngathi mhlawumbi ukuba barhoxise imikhosi engama-25,000? Ndithetha ukuthi, ukwehla-kwenyuka kujongeka njani?
Mnu PRICE: Inokubandakanya oko. Andizukuba ngummiselo.
UMBUZO: Ngaba kukho, njenga, umfanekiso ongathanda ukuwubona?
Mnu PRICE: Jonga andizukuba prescriptive ngalonto. Ndicinga ukuba ukwehla kunokuthatha iindlela ezininzi. Ingathatha imo yoko sikubonayo kunye noko sikubonileyo kwimida yaseUkraine. Ingathatha imo yento esiyibonayo ngokubhekiselele kumsebenzi waseRashiya kwindawo ekufuneka ibe lelinye ilizwe elizimeleyo, iBelarus. Ingathatha uhlobo lwento esiyivayo kwiRussian Federation. Ukunciphisa kunokuthatha iindlela ezininzi.
Ingathatha iifom ezininzi njengenyathelo lokuqala, kwaye yile nto singathanda ukuyibona ngenjongo yokugqibela engqondweni yokubona imikhosi yaseRashiya ibuyela kwiinkampu zabo ezisisigxina, ukuyeka oku kunye nokuphelisa kunye nokubuyisela umva oku kwakhiwa kunye nemida yaseUkraine, ukuba apheze ngeentetho ezinobundlavini. Ukunciphisa kunokuthatha iindlela ezininzi. Singayamkela nayiphi na kuyo.
UMBUZO: Ke kuphela - kuphela ukuba imikhosi yaseRussia ibuyele kwizisele zabo ngalo lonke ixesha iya kuba - iya kuthathwa njengokwehla?
Mnu PRICE: Hayi. Inqaku lam lelokuba kukho iindlela ezininzi zokuthomalalisa okunokuthatha. Kukho kwakhona ukuqhubeka. Siyakwamkela, ubuncinci njengenyathelo lokuqala, naluphi na uhlobo lokuthotywa.
Mnu PRICE: Ewe.
UMBUZO: Ewe, ngaba uyayazi intlanganiso eza kubanjelwa eParis ngolwesiThathu phakathi kwamagosa aseUkraine naseRussia, kwaye ulindele nakuphi na impumelelo?
Mnu PRICE: Ewe, ke andilindelanga nakuphi na ukubandakanyeka kwaseMelika kuloo nto. Masibone. Njengoko usazi, sithethathethana namahlakani kunye namaqabane, ukuquka iUkraine, ukumisela amanyathelo alandelayo, kwaye sinxibelelana neRussian Federation ngokunjalo, njengoko besesitshilo. Siyakholelwa ukuba idiplomacy yeyona ndlela ilungileyo eya phambili, kwaye sikulungele ukuxhasa iingxoxo kunye nediplomacy ezinceda ukuthomalalisa ukungavisisani. Ngoko ke siyayixhasa loo migudu eyenziwayo kwicala leRussian Federation ngokholo oluhle.
UMBUZO: Ngaba uzibonile iitweets zogxa wakho waseUkraine, isithethi? Ubhale kuTwitter ngelixa sikwingcaciso. Ndizakufunda ngokukhawuleza: “Kukho iimishini zozakuzo eziyi-129 eUkraine. Kwezi, zine kuphela ezibhengeze ukuhamba kwamalungu entsapho yabasebenzi: i-US, i-UK, i-Australia kunye neJamani. Abanye, kuquka i-EU, i-OSCE, i-COE, i-NATO, kunye ne-UN, abakayichazanga injongo yabo yokulandela loo manyathelo aphambi kwexesha. " Ngaba unayo impendulo kuloo nto?
Mnu PRICE: Andiyi.
UMBUZO: Siva ukuba ba-
Mnu PRICE: Andinayo impendulo kulonto. Ekuphela kwento endiyithethayo iya kuba yile nto ubundivile ndiyithetha ngaphambili. Oku kusekelwe kwikhrayitheriya enye kunye nekhrayitheriya enye iyodwa. Yinto ephambili esiyincamathele kukhuseleko kunye nokhuseleko koogxa bethu eUkraine.
UMBUZO: Kulungile. Ndinombuzo wase-Iran-uxolo.
Mnu PRICE: Ngaba ikhona enye into eRussia-Ukraine? Ewe.
UMBUZO: Ndinokulandelela ukufuduswa. Ndisuka kwimidiya yaseUkraine -
Mnu PRICE: Ah, wamkelekile.
UMBUZO: -kwaye ndifuna ukuyibeka icace into yokuba iUnited States ayizange ikhuphe oonozakuzaku nangexesha elibi kakhulu kule minyaka isibhozo idlulileyo. Kwaye i-Kyiv ikude ngokwaneleyo kumda waseRashiya. Ngaba kuthetha ukuba kulwazi lwakho kunye nobukrelekrele bakho, inkunzi yethu - i-capital yase-Ukraine ijoliswe kuyo kwaye iyona nto ijoliswe kuyo yokuhlasela kweRashiya?
Mnu PRICE: Ewe, jonga, ewe, andizukuthetha nabuphi na ubuntlola, kodwa njengoko besesitshilo, kubandakanywa nesibhengezo sethu phezolo, sikwenza oku njengenyathelo lobulumko ngenxa yeenzame eziqhubekayo zaseRussia zokuphelisa uzinzo kwilizwe. kunye nokujongela phantsi ukhuseleko lwabemi baseUkraine kunye nabanye abandwendwela okanye abahlala eUkraine.
UMBUZO: Kwaye amagosa aseMelika aphinde akhankanya- kwaye unjalo-ukuba awunikezeli kwiinzame zozakuzo eRussia. Nceda ucacise? Usele ukhankanyile malunga nokhuseleko - ukhuseleko oludibeneyo. Uthetha ukuthini kanye kanye? Apho kukho indawo yothethathethwano neRashiya? Yaye uthini umbandela wokulalanisa?
Mnu PRICE: Ngoko siye satsho ngokungaguqukiyo ukuba sizimisele ukubandakanya iingxoxo kunye nediplomacy, kwaye siye sabandakanyeka kwingxoxo kunye nediplomacy kunye neRussian Federation siyazi, ngokuqinisekileyo, ukuba amaRashiya apapashe izivumelwano zabo ezimbini. Kukho izinto ezithile kwezo zivumelwano, njengoko usivile sithetha ngokuphindaphindiweyo, ezingaqalisi ngokupheleleyo, kubandakanywa nomgaqo-nkqubo we-NATO obizwa ngokuba yi-"Open Door".
Kodwa kukho ezinye iindawo apho-ingxoxo kunye nediplomacy zinokunceda ukuphucula ukhuseleko lwethu oluhlangeneyo, ukhuseleko lwe-transatlantic. Ndingayibeka ingongoma yokuba nangaphambi kokuba kuqalwe lo kwakhiwa komkhosi waseRashiya ecaleni kwemida yaseUkraine, sele siqhube iindibano ezimbini zeNgxoxo yoZinzo lweSicwangciso, indawo leyo uSekela Nobhala uSherman ayisebenzise kwenye iveki ukudibana nogxa wakhe waseRussia ukuze baxoxe ngezinye zezi. imiba. Kwaye inyani yokuba into ebizwa ngokuba yi-SSD yaqala emva kwengqungquthela phakathi kukaMongameli uPutin kunye noMongameli uBiden ngoJuni uthetha kwinto yokuba siyakholelwa ukuba kukho imiba xa kufikwa kulawulo lwezixhobo, umzekelo, apho sinokuba neengxoxo ezineziqhamo kunye. amaRashiya anokujongana neenkxalabo zethu zokhuseleko, okuthetha ukuba abo base-United States kunye namahlakani ethu kunye namaqabane ethu, kwaye banokusabela kwezinye iinkxalabo ezithethwe ngamaRashiya. Sithethe ngokuthe ngqo nokubekwa kwemijukujelwa eYurophu, ukhetho lwezixhobo zenyukliya ezinobuchule nezingezizo ezobuchule, amanye amanyathelo olawulo lwezixhobo, kunye nezo ziyilelwe ukwandisa ukungafihli kunye nokuzinza.
Ingongoma ephambili kuloo nto kukuba nawaphi na amanyathelo ebesiya kuwathabatha ebengayi kuba kukuyekelela. Kuya kufuneka ukuba babe ngokulinganayo, oku kuthetha ukuba abantu baseRussia kuya kufuneka benze into eya kunceda ukuphucula ukhuseleko lwethu - ukhuseleko lwethu.
Inqaku lokugqibela kule: Konke oku kuye kwaye kuya kuqhubeka kuqhutywa ngokucokisekileyo nangokupheleleyo ngokubonisana kunye nabalingane bethu kunye namaqabane, kwaye oko kubandakanya iUkraine. Xa uNobhala wadibana noMongameli uZelenskyy, xa edibana noMongameli kuleba - okanye uMphathiswa Wezangaphandle kuleba, xa wayethetha noMphathiswa Wezangaphandle kuleba ngoLwesihlanu emva kokudibana noMphathiswa Wezangaphandle uLavrov, sinomsebenzi wokubonisa ngokucacileyo kunye namaqabane ethu ase-Ukraine imiba exoxwayo kunye nenkqubela phambili yezo ndibano.
UMBUZO: (Engavakaliyo) kumcimbi wasePalestina?
Mnu PRICE: Ngaba ikhona enye into eRussia-Ukraine? UBen, omnye-
UMBUZO: Ewe. Unobhala wayeza kuphakamisa uPaul Whelan kunye noTrevor Reed kwiingxoxo zakhe noMphathiswa Wezangaphandle uLavrov. Ngaba kukho uhlaziyo? Ngaba ucinga ukuba imeko yangoku iza kuyenza ibengcono okanye ibe mbi ngakumbi imeko yabo?
Mnu PRICE: Oko kuxhomekeke kwiRussian Federation. Ndinokuqinisekisa, njengoko uNobhala watshoyo phambi kwentlanganiso, ukuba uye wawaphakamisa amatyala kaPaul Whelan kunye noTrevor Reed, bobabini abakhe batyelela eRussia njengabakhenkethi nabaye babanjwa ngokungekho sikweni ixesha elide kakhulu, bayibeka ingongoma yokuba ixesha elidlulileyo lokubabona bebuyela ngokukhuselekileyo kwiintsapho zabo. Kwaye siya kuqhubeka sisebenza kuloo nto.
UMBUZO: Enkosi, Ned. Enye enye kwingxaki yaseRussia-Ukraine. Ngaba abalawuli beBiden bayayibona okanye bayavuma ukuba naluphi na uhlaselo okanye uhlaselo lwaseRussia ngokuchasene neUkraine lunokubangela impembelelo yedominos kwimiba emininzi kangaka? Ndiza kukhankanya eminye imizekelo: iChina ngokuchasene neTaiwan; i-Iran kunye nabaxhasi bayo; INorth Korea kunye nemijukujelwa yayo yokulwa neSouth Korea neJapan; IVenezuela, iCuba, kunye namaqhinga abo okucinezela amagunya kunye neentshukumo.
Ke uNed, umhlaba wonke ujonge into eza kwenziwa yi-US ukumisa iRussia. Uphawula njani ngale nto?
Mnu PRICE: Yayiyintoni inxalenye yokugqibela? Senza ntoni?
UMBUZO: Uphawula njani ngale nto? Ngaba abalawuli beBiden bayayazi indlela ebaluleke ngayo umhlaba wonke ubukelwe? Kanye njengokuba kwenzeka e-Afghanistan, kwaye ezinye iingxelo zithi iRussia ithatha iphepha lezinto ezenzeke e-Afghanistan kwaye ihambela e-Ukraine-okanye inokuhamba-ke ngoku ukuba bayenzile loo nto, yonke le mpembelelo ye-dominos ingenzeka.
Mnu PRICE: Ewe, ngaphambi kokuba ndifike kumbuzo wakho obanzi, ndifuna ukujongana nenxalenye yokugqibela yombuzo wakho, kwaye yiAfghanistan.
Ndinobunzima bokuqonda ukuba kwenzeka njani ukuba kupheliswe ukuzibophelela emkhosini kweminyaka engama-20 apho iUnited States ichithe iibhiliyoni ngeebhiliyoni zeedola minyaka le, apho amawaka amajoni aseMelika - ngaxeshanye amashumi amawaka amajoni aseMelika - ayekhona. imisiwe; apho kwakukho ukuzibophelela kwe-NATO, apho amawaka emikhosi ye-NATO yayimi iminyaka emininzi, ithatha abantu ababuleweyo, inyamezela ilahleko yobomi ngokuzibophelela komkhosi ovulekileyo - sasinjani-sakuba njalo, siya kuba njani. ibekwe ngcono ngokweqhinga lokuthatha le nto siyibonayo ngoku kwiRussian Federation.
UMongameli wacaca xa esenza isibhengezo sakhe sokuba siza kukuphelisa ukubandakanyeka kwethu emkhosini e-Afghanistan, eso sizathu sokuba senze njalo yayingekokuthintela esinye isizukulwana samalungu enkonzo yaseMelika okanye amalungu enkonzo ye-NATO ekulweni. kunye nokubhubha e-Afghanistan, kodwa ukusivumela ukuba sigxile kwizoyikiso kunye namathuba enkulungwane yama-21. Ke njengoko sithatha olu hlaselo lwaseRussia, njengoko sifuna ukuzibandakanya kule ndlela yokuzikhusela kunye nokuthintela, yile nto kanye siyenzayo.
Ke bendifuna ukujongana nenqaku malunga neAfghanistan.
UMBUZO: Kodwa uNed, ndicinga ukuba inqaku lelolawulo (elingavakaliyo) lijike umva kumahlakani alo apho, abantu abaninzi bayibona injalo; mhlawumbi amahlakani axhalabile ukuba oko kuyenzeka ngoku.
Mnu PRICE: Okokuqala, iUnited States ayizange iyinikele umva i-Afghanistan. Usibonile sihlala sisebenzisana kunye kwaye sibonakalisa ukuzibophelela kwethu okokoko kubantu base-Afghanistan, kwaye sikwenzile oko nangaliphi na inani leendlela. Akukho mfuneko yokuba ndibabaleke ngoku kuba sijonga oku rhoqo.
Ke nabani na othatha nasiphi na isifundo ngaphandle kwento yokuba i-United States yaziva ilixesha lokuphelisa oko bekukukuzibophelela komkhosi okuvulekileyo apho amawaka ngamawaka amajoni aseMelika aye alwa kwaye amawaka efile, kwaye ngokufanayo. kwi-NATO ngokunjalo, yachitha i-United States kunye namaqabane ethu e-NATO iibhiliyoni kwiibhiliyoni - iitriliyoni kwisithuba seminyaka engama-20; nabani na onokuthatha nasiphi na isifundo kuloo nto ngaphandle kwento yokuba iUnited States izibeka ekuthatheni izoyikiso kunye namathuba esijongene nawo ngoku, ngelixa siqhubeka sisebenzisana kunye nokuxhasa abantu base-Afghanistan, kuya kuba luhlalutyo oluyimpazamo.
Kodwa kumbuzo wakho, nangona kunjalo, siyicingile loo nto. Yiyo loo nto kanye uNobhala enze intetho eBerlin kwiveki ephelileyo ebekuwo kanye lo mbuzo, ukwenza inqaku lokuba le nto siyibona izama iRussia kwaye iyenze ngokuchasene neUkraine ibalulekile ngokwayo, kunjalo. Ukraine liqabane elisondeleyo; sinabahlobo abasenyongweni kubantu baseUkraine. Kodwa ngandlela-thile, oku kubaluleke kakhulu njengoko i-Ukraine, inkulu kunombuzo wengxabano, ingxabano eveliswe eRashiya, phakathi kweRashiya ne-Ukraine. Oku malunga nokuba yintoni na kufuneka ibe yimithetho engenakuphulwa yemithetho ebizwa ngokuba yimithetho-based order international, kufuneka ibe yimithetho engavumelekanga ukuba kwiminyaka eyi-70 edlulileyo, ukususela ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II, ikhusele kwaye ivumele ngokwenene amanqanaba okhuseleko angazange abonwe ngaphambili. , ukuzinza, ukuchuma. Oko kubandakanya kwi-eYurophu, kodwa ikwabandakanya kwiindawo ezingaphaya koko.
Kwaye kunjalo, usiva sithetha malunga nemithetho esekelwe kwimithetho yamazwe ngamazwe kungekuphela nje kwimeko yaseYurophu kunye nento eyenziwa yiRashiya ukuyijongela phantsi, kodwa nakweminye imimandla, ngokukodwa i-Indo-Pacific, apho sinenkxalabo efanayo malunga nokuba yintoni na. amazwe athile nawo azamile ukwenza ukujongela phantsi, ukutshabalalisa loo migaqo isekelwe kucwangco lwamazwe ngamazwe. Ke asilahlekanga kuthi ukuba amaRussia kunye neziphumo zento abayenzayo, njengoko ibaluleke kakhulu eUkraine, badlulele ngaphaya kweUkraine.
UMBUZO: Ned, ndinemibuzo emibini ngeIran naseKuwait.
UMBUZO: Ned, ndingabuza-
Mnu PRICE: Ngokuqinisekileyo, ndiya kubuyela kuwe. Wathi.
UMBUZO: Ubundibiza kwada kwakathathu nakabini;
Mnu PRICE: Uthe, sele ucele i-
UMBUZO: Ilungile. Hayi, ndiyaqonda.
Mnu PRICE: Sele ubuze umbuzo ngelixesha lengcaciso.
UMBUZO: Ndiyaqonda. Ndifuna ukutshintsha izihloko, nangona kunjalo. Ndifuna ukukubuza malunga nePalestinian-American eyafela elugcinweni lwamaSirayeli ngomhla we-12 kaJanuwari. Ngoku, ndiyazi ukuba ubize amaSirayeli ukuba ufuna ukubona ukuba zazinjani iimeko njalo njalo. Okokuqala, ngaba basabela kuwe? Ndithetha ukuthi, inokuba nguwuphi na umzalwana wam lowo.
Mnu PRICE: Uxolo, ibiyintoni indawo yokugqibela?
UMBUZO: Ndiyathetha, oko kunokuba-akukho ngxaki. Ndisitsho nje, bakuphendule?
Mnu PRICE: Ke ngoko asikayiboni ingxelo yokugqibela evela kuRhulumente wakwa-Israel. Siyaqhubeleka nokuxhasa uphando olunzulu ngeemeko zesi siganeko. Siyakwamkela ukufumana ulwazi olongezelelweyo kuRhulumente wakwa-Israel ngokukhawuleza. Sikhathazeke kakhulu ngeengxelo zeendaba malunga neemeko zokufa kukaMnu Assad, ummi waseMelika, owafunyanwa efile emva kokuba umkhosi wase-Israel umvalele. Njengoko besesitshilo ngaphambili, siye sanxibelelana ngokusondeleyo nosapho lwakhe ukuze senze uvelwano, ukubonelela ngeenkonzo ze-consular. Sasimelwe emva kukaMnu Assad ngokunjalo.
UMBUZO: Hayi ke usweleke ebotshwe izandla ebotshwe imilomo njalo njalo. Kwaye luhlobo luni - benza - ngaba ubanika umda wexesha? Ngaba uyawathemba amaSirayeli ukuba azenzele olwawo uphando kweli tyala?
Mnu PRICE: Njengoko benditshilo, Ndithe, siyakwamkela ukufumana olo lwazi ngokukhawuleza.
UMBUZO: Kulungile. Ndinombuzo-omnye okhawulezayo. Kukho iingxelo zokuba kukho iintatheli ezili-17 zasePalestine ezivalelweyo namhlanje. Ngaba leyo yinto onokuthi uyiphakamise kunye namaSirayeli ukujonga ukuba zithini iimeko zokuvalelwa kwabo?
Mnu PRICE: Siyazazi iingxelo ozicaphule. Njengoko sisenza kwihlabathi jikelele, sixhasa iintatheli ezizimeleyo kunye nemibutho yeendaba, kwaye ukhe wasiva sithetha ngaphambili malunga nokubaluleka kokuxela kwabo, ngakumbi kwiindawo apho uxinzelelo luphezulu okanye ungquzulwano. Sikholelwa ukuba ukuhlonelwa kwamalungelo oluntu, inkululeko esisiseko, kunye noluntu oluqinileyo lubaluleke kakhulu kulawulo olunoxanduva noluphendulayo.
UMBUZO: Kwaye ekugqibeleni, i-Ambassador yase-US kwiZizwe eziManyeneyo kwiveki ephelileyo yathetha kwaye yaqaqambisa ubundlobongela kunye nobundlobongela obuchasene namaPalestine. Ukanti sibone ukwanda kobundlobongela kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Ngaba leyo yinto onokuthi uyiphakamise okanye uxakeke kakhulu ngemicimbi efana ne-Ukraine ne-Iran kunye nazo zonke ezi zinto-ndithetha ukuba, kuyaqondakala ukuba kunjalo?
Mnu PRICE: Wathi, singurhulumente omkhulu. Siyisebe elikhulu. Ukungasebenzisi isikweko esisetyenziswe kakhulu, kodwa sinokuhamba kwaye sihlafune itshungama ngaxeshanye. Xa kufikwa kulo mba uwuphakamisile, usivile sithetha ngawo. Ucaphule amagqabantshintshi mva nje. ISebe likaRhulumente liye laphawula ngaphambili malunga noku. Sikholelwa ukuba kubalulekile ukuba onke amaqela azikhwebule kumanyathelo athi aqhubele phambili ukruthakruthwano kwaye acuthe iinzame zokuqhubela phambili isisombululo sobuzwe-mbini ekuxoxwe ngaso. Oku kuquka ubundlobongela obujoliswe kubemi kunye nobundlobongela babahlali.
UMBUZO: Ned, ngaba ndingabuza into malunga ne-Iran (engavakaliyo)?
Mnu PRICE: Ke imibuzo emibini yaseIran. Ngokuqinisekileyo.
UMBUZO: Ewe. Umphathiswa wezangaphandle e-Iran ngoMvulo uthe bakulungele ukuqwalasela iingxoxo ezithe ngqo ne-United States ukuba ngaba baziva ngathi banokufumana isivumelwano esihle neziqinisekiso. Nokuba yeyiphi na indlela, ngaba bekukho naluphi na unxibelelwano kule nto? Kwaye ngaba nina nicinga ukuba neentetho ezithe ngqo kunye nabo?
Mnu PRICE: U-Humeyra, njengoko uyazi, sikulungele ukudibana ngokuthe ngqo. Besisoloko sibambe isikhundla sokuba kuya kuba nemveliso ngakumbi ukunxibelelana ne-Iran ngokuthe ngqo kuzo zombini iingxoxo ze-JCPOA nakweminye imiba. Oku kunabela kwiifomathi zamazwe amabini kunye nakwiindlela ezininzi. Ukudibana ngokuthe ngqo kuya kwenza unxibelelwano olusebenzayo ngakumbi, olufuneka ngokukhawuleza ukufikelela ukuqondana malunga nokubuyela ekuthotyelweni kwe-JCPOA.
Senze le ngongoma ngaphambili, kodwa xa sijonga isantya senkqubela phambili yenyukliya yase-Iran, ixesha lihamba lifutshane kakhulu de izibonelelo zokunganyangeki ezidluliselwe yi-JCPOA njengoko yayiyilwe ekuqaleni yaza yaphunyezwa ngo-2015 yaza yaphunyezwa ngo-2016 yoyisiwe yinkqubela phambili yenyukliya. eyenziwe yiIran. Ke sijonge ukwenza olu diplomacy ngokungxamisekileyo, kwaye besisoloko sicaca ukuba ukukwazi ukuzibandakanya ngokuthe ngqo kuya kuphumeza ezo njongo.
UMBUZO: Njengoko unikwe isikhundla sakho ngoku kunye nento abayithethileyo, ngaba kufuneka silindele ukuba oku kwenzeke kwakamsinya? Ngaba sikho isizathu sokuba oku kwenzeke kungekudala? Ngaba kuye kwakho naluphi na unxibelelwano olungangqalanga malunga nokwenza oku kwenzeke kungekudala?
Mnu PRICE: Kuya kufuneka ubuze amagosa eTehran. Thina – ayisosihlandlo sokuqala sithetha ngale ngongoma. Senze le ngongoma ngokungaguqukiyo ukuza kuthi ga ngoku. Ama-Irani anyanzelise kwifomathi engathanga ngqo eVienna. Kudala siyiqaphela into yokuba iingxoxo ezingathanga ngqo, ngakumbi malunga nomba wobu bunzima nokubaluleke kangaka, zingumqobo. Ngoko ukuma kwethu kuye kwacaca. Ndingakukhomba kwabasemagunyeni eIran.
UMBUZO: Into yam yokugqibela kule. Sibe nodliwano ndlebe noMthunywa oKhethekileyo uMalley izolo, othe kuya kuba nzima ukucinga ukuba i-US ibambe isivumelwano ne-Iran ngaphandle kokuba ababanjwa baseMelika bakhululwe. Ndifuna nje ukukutyhala kancinci malunga nokuba kutheni abaphathi bengazimiselanga ukuthetha ngokuthe ngqo ukuba abayi kuphinda bajoyine i-JCPOA ngaphandle kokuba abemi baseMelika bakhululwe.
Mnu PRICE: Ewe, into eyathethwa nguMthunywa oKhethekileyo kukuba, "kunzima kakhulu kuthi ukuba sicinge ukubuyela kwisivumelwano senyukliya ngelixa abantu baseMelika abamsulwa bebanjwe yi-Iran."
Mnu PRICE: Le ngongoma eyenzile ngokuphindaphindiweyo ngaphambili, ngoko oku - akufanele kube ziindaba. Kwakhona, ndiyakuxelela, ayizondaba kubantu base-Irani. Bakhe bayiva le ndawo ngokungathanga ngqo kuthi ngaphambili.
Kodwa uMthunywa oKhethekileyo uphinde waveza ingongoma yokuba le miba isebenza kwiindlela ezahlukeneyo, kwaye zisebenza kwiingoma ezahlukeneyo ngesizathu esilula kakhulu: Ukubuyela ngokufanayo ekuthotyelweni kwe-JCPOA yeyona nto ilungileyo isindululo esingaqinisekanga. Sifuna ukubona aba bantu baseMelika babanjwe ngokuchasene nentando yabo iminyaka emininzi, kude neentsapho zabo, bebuya ngokukhawuleza. Ayizukusebenzela iinjongo zethu, ayizukusebenzela umdla wabo, ukubophelela ikamva labo kwisindululo endithe sasingaqinisekanga ngaphambili. Yiyo loo nto ngokuqinisekileyo imbala intsebenziswano yethu, kodwa ezi zisebenza kwiingoma ezahlukeneyo.
UMBUZO: Ndingabuza umbuzo?
UMBUZO: Kodwa uNed, indlela oyichaza ngayo, ikhangeleka - ifana kakhulu nomqathango.
Mnu PRICE: Kwakhona, akusiyo imeko yokuba kukho naluphi na unxibelelwano oluthe ngqo okanye olucacileyo ngokuchanekileyo kuba ukubuyiswa okufanayo ekuthotyelweni kwe-JCPOA yeyona nto ingcono isiphakamiso esingaqinisekanga. Sifuna ukubuya kwaba bantu baseMelika kube sisindululo esithile, kwaye ke sigcina le miba yahlukeneyo.
UMBUZO: Umphathiswa wezangaphandle waseKuwait undwendwele iBeirut ngoMgqibelo kwaye wazisa izindululo zokwakha ukuzithemba eLebhanon kunye nomyalezo olungelelaniswe neGulf States, kwaye undwendwela iWashington kule veki. Ngaba uyazazi izindululo? Kwaye ngaba kukho naluphi na unxibelelwano phakathi kotyelelo lwakhe eBeirut naseWashington?
Mnu PRICE: Ewe, ndilindele ukuba xa uNobhala edibana nomlingane wakhe waseKuwait ngoLwesithathu ukuba baya kuba nethuba lokuxoxa ngeLebhanon. Yinto i-United States, kunye namahlakani ethu - kubandakanywa namahlakani ethu e-Gulf, amaFrentshi, kunye nabanye - sigxile kakhulu, kakhulu. Ngoko ke ndiyacinga ukuba sizakukwazi ngakumbi ukuthetha emva kwentlanganiso yamacala amabini ngoLwesithathu.
UMBUZO: (Ayivakaliyo) kugxa wethu uTracy Wilkinson eHonduras. Amaqela akhuphisanayo kwinkongolo yakhe anokuthi aphazamise ukumiselwa kukamongameli omtsha ngoLwesine, lowo iSebe likaRhulumente lakhawuleza ukumamkela. USekela Mongameli uHarris ucwangciselwe ukuhamba ukuya kuvulwa. Ngaba i-US yenza nantoni na ukuthomalalisa loo ngxaki?
Mnu PRICE: Ewe, into endiya kuyithetha kukuba ukukhethwa kobunkokheli bethutyana kwiHonduran National Congress sisigqibo esizimeleyo saseHonduras. Sijonge ngethemba ekwenzeni nzulu umsebenzi wethu kunye nolawulo olungenayo lweCastro kunye namaHondurans avela kwiinkalo zonke zezopolitiko ukuze siqhubele phambili izinto esinomdla kuzo. Sihlaba ikhwelo kubadlali bezopolitiko ukuba bahlale bezolile, babandakanyeke kwiingxoxo, bahlukane nobundlobongela kunye neentetho ezixhokonxayo, kwaye sikhuthaza abalandeli babo ukuba bavakalise iimvakalelo zabo ngoxolo ngelixa behlonipha umthetho.
Njengoko usazi, uSekela Mongameli uHarris sele enethuba lokunxibelelana noMongameli-onyuliweyo uCastro ukuba avuyisane naye ngempumelelo yakhe eyimbali njengomongameli wokuqala waseHonduras. Kuloo ngxoxo kwinyanga edlulileyo baxoxe ngomdla wabo ohlangeneyo ekusebenzeni kunye ukujongana neengcambu ezibangela ukufuduka, ukukhuthaza ithuba elibandakanyayo lezoqoqosho kubantu baseHonduras, ukuphucula - ukulwa urhwaphilizo, ukunciphisa izisongelo zokhuseleko, kunye nokuphucula ukufikelela kwimpilo. kunye nemfundo.
UMBUZO: Enye eTurkey kumlingane wam weVOA.
Mnu PRICE: Ngokuqinisekileyo. Ngaba unayo - ngaba kukho ukulandelela, Conor?
UMBUZO: Hayi, ngomnye umbuzo, ke qhubeka, uBarbara.
UMBUZO: Ke ukuba awukhathali, i-i-VOA iqabane lam lazibuza ukuba kukho nakuphi na ukusabela kwiSebe likaRhulumente kwiimeko ezimbini malunga nezithintelo zokuthetha ngokukhululekileyo eTurkey. Omnye nguMgqibelo wokugqibela: intatheli yaseTurkey eyaziwayo yavalelwa ngokuthuka uMongameli Erdogan. Namhlanje i-arhente karhulumente - urhulumente uhlawulise ijelo likamabonakude alisebenzelayo. Ityala lesibini yimvumi edumileyo efumana izoyikiso zamaSilamsi kunye namaqela obuzwe ngenxa yento ayibhalileyo kwithuba elidlulileyo, kwaye uMongameli Erdogan wamgrogrisa ngokumthulisa ngexesha lemithandazo yangoLwesihlanu, esithi, "Ngumsebenzi wethu ukusika ezo lwimi," ungacaphuli.
Ngaba unayo nayiphi na impendulo kula matyala?
Mnu PRICE: Ewe, oku kuyasebenza eTurkey kodwa kukho jikelele kwisicelo sayo ngokunjalo, kwaye yinyani yokuba sikholelwa ukuba inkululeko yokuthetha yomeleza idemokhrasi kwaye kufuneka ikhuselwe nangona ibandakanya intetho abanye banokufumana ingxabano okanye abanye banokungakhululeki. Siyazi kwaye siphoxekile yingqalelo kunye nokubanjwa kukaSedef Kabaş, elinye lamatyala owakhankanyileyo, kwaye loo migaqo isebenza ngokulinganayo eTurkey njengoko yenzayo nakweliphi na ilizwe.
UMBUZO: Bhekina Faso. Umkhosi uye waya kumabonakude ukubhengeza ukuba baphethe. I-ofisi kamongameli yakukhaba oko, kodwa umongameli khange abonwe. Ngaba uyayazi into eyenzekayo? Ngaba kukho ubhukuqo-mbuso? Ngaba sele uqalisile ukuvavanya ukuba ikhona okanye ayikho?
Mnu PRICE: Ewe, siyazazi iingxelo zokuba umongameli waseBurkina Faso uvalelwe ngamalungu omkhosi welizwe. Iqela lethu lozakuzo e-Ouagadougou liyibeke esweni le meko kwaye ligcina unxibelelwano namaqabane ezizwe ngezizwe kwakunye namagosa asuka kurhulumente kaMongameli Kaboré. Simemelela ukuba akhululwe ngokukhawuleza uMongameli uKaboré kunye namanye amagosa karhulumente, kwaye amalungu omkhosi wokhuseleko ahloniphe umgaqo-siseko waseBurkina Faso kunye neenkokheli zoluntu. Sibongoza onke amacala ale meko yolwelo ukuba ahlale ezolile kwaye afune uthethathethwano njengendlela yokusombulula izikhalazo. Thina - i-ambassy yethu e-Ouagadougou icebise abemi base-US e-Burkina Faso ukuba ixesha elimiselweyo liye laphunyezwa ngabasemagunyeni basekhaya kwaye abemi base-US bayacetyiswa ukuba bahlale kwindawo yokuhlala, baphephe izihlwele ezikhulu, kwaye babeke iliso kwimithombo yeendaba yasekhaya ukuze kuhlaziywe.
UMBUZO: I-US ibonelela ngesixa esibalulekileyo soncedo eBurkina Faso. Ngaba wenza uvavanyo lobhukuqo-mbuso?
Mnu PRICE: Ke le yimeko eguqukayo. Yimeko ehlala imanzi. Iqhubekile nokuphuhla nakwiyure zamva nje, kungoko kusekude ukuba ibonakalise, ubuncinci ngokusemthethweni kuthi, ubume bophuhliso oluqhubekayo. Sicele uthintelo ngabo bonke abadlali njengoko siphonononga ngocoselelo imicimbi esemhlabeni ngayo nayiphi na impembelelo enokubakho kuncedo lwethu.
UMBUZO: I-Iran, ukulandelela ngokukhawuleza kakhulu. I-AFP isandula ukunika ingxelo yokuba - zibalelwa kumagosa akwinqanaba eliphezulu laseMelika njengoko esithi angathanda ukubona iingxoxo ngqo neIran. Ngaba ungayiqinisekisa loo nto? Ngaba ufuna iingxoxo ezithe ngqo neIran ku-
Mnu PRICE: Bendicinga ukuba sixoxe nje oku imizuzu emihlanu noHumeyra.
Mnu PRICE: Ewe. Siya.
UMBUZO: Inokuba ndiyiphosile. Kulungile, uxolo.
Mnu PRICE: Ewe. Ewe.
UMBUZO: Ke yintoni enethemba lokuba iya kufezekiswa ngeentetho ezithe ngqo endaweni yento eyenzekayo eVienna ngoku?
Mnu PRICE: Kulungile, besinotshintshiselwano olude malunga noku, ke ndingakuthumela kuloo nto.
Imibuzo embalwa yokugqibela. Ewe Nceda? Ewe?
UMBUZO: Ngaba kukho naluphi na uhlaziyo onokuthi ulunike kwi-ISIS jailbreak kumantla eSiriya, mhlawumbi ngokwemiqathango yenkxaso yokubambisana kunye nenani lababalekayo? Kwaye ke yintoni kanye le – ithini malunga nokukwazi kweSDF ukukhusela amaziko, kwaye ngaba ukubona oku njengokungaphumeleli kwezobuntlola kwicala lomfelandawonye?
Mnu PRICE: Ewe, njengoko ububonile, sikhuphe ingxelo kule mpelaveki, kwaye salugxeka uhlaselo lwe-ISIS kwiveki ephelileyo kwiziko lokuvalelwa laseHasakah kumantla-mpuma eSyria, esiqonda ukuba ibilinge lokukhulula abalweli be-ISIS ababanjiweyo. Siyayincoma i-SDF ngempendulo yayo ekhawulezileyo kunye nokuzibophelela okuqhubekayo kumlo ochasene ne-ISIS, kwaye olu hlaselo engqondweni yethu lugxininisa ukubaluleka kunye nesidingo sokuxhasa ngemali ngokupheleleyo i-Global Coalition Yokoyisa amalinge e-ISIS okuphucula nokukhusela ukugcinwa kobuntu kwamajoni e-ISIS, kubandakanywa nokomeleza ukhuseleko lweziko lokuvalelwa.
Kuthi kukwagxininisa imfuno engxamisekileyo yokuba amazwe avela kuwo abuyisele kwilizwe lawo, abuyisele kwisimo sangaphambili, adibanise, kwaye atshutshise - apho kufanelekileyo - abemi bawo ababanjelwe kumntla-mpuma weSyria. Sihlala sizibophelele ekunyamezeleni ukoyiswa kwe-ISIS kwihlabathi liphela, sisebenza, kunye, nangomanyano kunye namaqabane ethu asekhaya. Kodwa ngaphaya koko, kuphuhliso lobuchule emhlabeni, kufuneka ndikubhekise kwi-DOD.
UMBUZO: Ngobusuku bokugqibela, iSebe leSizwe lathi ukuba kukho uhlaselo lwase-Ukraine, ukuba i-US ayinakukwazi ukukhupha abemi bayo. Ndazibuza ukuba unokuchaza ukuba kutheni, kutheni oko kuya kuba njalo.
Mnu PRICE: Ben, oku - oku kuye kwahlala kunjalo ngokwembali. Olona xanduva lwethu luphambili kukubonelela ngohlaziyo kunye nophuhliso kunye nokuqinisekisa unxibelelwano kuluntu lwabucala lwaseMelika kulo naliphi na ilizwe, kubandakanywa naxa sisenza into efana nokuhamba okuyalelweyo okanye ukunduluka okugunyazisiweyo. Ndiyazi ukuba amava amva nje e-Afghanistan anombala uluvo abanalo abanye abantu malunga noku, kodwa i-Afghanistan, ngenxa yezizathu esazi kakuhle, yayikhethekile. Yayiyinto eyayingazange yenziwe nguRhulumente waseUnited States ngaphambili.
Kwaye njengoko usivile kumxholo we-Ethiopia, iUkraine, kunye namanye amazwe, intlawulo yethu kukuqhubeka nokubonelela ngohlaziyo lolwazi kuluntu lwabemi baseMelika, ukubabonelela ngeenkonzo, kubandakanywa nemali-mboleko yokubuyisela ukuba bafuna ukuzifumana kurhwebo. iinketho. Ezo zikhetho zorhwebo, ngokuqinisekileyo, zisekhona kwimeko yaseUkraine. Yiyo loo nto ingcebiso yaphezolo ibongoze abantu baseMelika ukuba bacinge ngokuzifumana kwezo ndlela zorhwebo, kwaye i-ambassy ikulungele ukunceda kwezo nzame.
UMBUZO: Enkosi, Ned.
Oku ngakumbi: UVladimir Putin | Rhashiya | iTshayina | urhulumente | ISaudi Arabia | Yemen | Uhlaselo lwaseRashiya | emantla ekorea | Jemani | INdlu yeNdlu | Geneva | Afghanistani | Yukreyini | I-ambassador | Komishoni yaseYurophu | Korea | Iran | BaseRussia | ikarikuni | eunited States | Berlin | NATO | Rayeli | iYurophu | Ostreliya | Paris | IUnited Arab Emirates | IMfazwe | Vienna | Kyiv | Estoniya | amazwe adbeneyo | Libhanon | Beirut
Ngomhla woku-1 kuCanzibe Ingxelo yeWorld Tourism Network Rhashiya, Yukreyini|
Awona mazwe aPhumelelayo ngaBafundi ukuba atyelelwe Jemani |
Ikamva elitsha leSitayile se-Global Aviation Saudi Arabia ISaudi Arabia|
Ukufowunela imida evulekileyo: i-Polar Bear kunye ne-Beluga Whale Tourism eCanada urhulumente|
Umsebenzi wokwenza ukhenketho kunye nokhenketho wehle nge-28.1% ngo-Epreli wama-2022 Jemani |
Afghanistani I-ambassador Ostreliya Beirut Berlin iTshayina Estoniya iYurophu Komishoni yaseYurophu Geneva Jemani urhulumente Iran Rayeli Korea Kyiv Libhanon NATO emantla ekorea Paris Rhashiya Uhlaselo lwaseRashiya BaseRussia ISaudi Arabia ikarikuni Yukreyini IUnited Arab Emirates amazwe adbeneyo eunited States Vienna UVladimir Putin IMfazwe INdlu yeNdlu Yemen
U-DJ Marshmello ochongiweyo kwiGrammy kwi-Headline Isle ye-MTV...
I-Amerijet International Airlines yanda ngezintandathu ezintsha...
UBoeing ubiza oomongameli abatsha bezoKhuselo, iNdawo kunye ...
Eyona Labyrinth inkulu ehlabathini kungekudala iza kuphinda ivulwe
IMarike yeZixhobo ze-Intrauterine Insemination (IUI) yi...
IMarike yeFayibha ye-Basalt yoHlumo oluKholelekayo, oluneenkcukacha...
Isibheno esisemthethweni nguRhulumente wase-Ukraine kuyo yonke i-UNWTO...
I-ATM 2022: Umkhondo wexesha elide wokuhamba kuMbindi Mpuma...
Incwadi eNtsha yokuFa okukufutshane iqala "Ndadibana noThixo"
Indlela entsha yoKhenketho lwezoNyango inzima eGuadalajara...
Iziphumo zovavanyo lweklinikhi ezihlaziyiweyo kuNyango lweFabry...
INtetho Yelungu lobufazi: IPodcast eNyusa abantu abaneeLukazi